Kooxda ganacsiga ee uu hogaaminayo maareeyaha guud Colin si ay u muujiyaan dabeecada xarrago leh ee Canton Fair!
Waxaan tixraacnaa labada Carwo Carwo sanad walba waligoodna kama maqnaan. Sawirka soo socda waa kooxdeena ganacsiga xirfadeysan oo macaamiisha la jooga the
Bilowgii sannadka 2020, waxaan la kulannay cudur gaar ah oo faafa-COVID-19. Warshado badan ayaa ku qasbanaaday inay joojiyaan wax soo saarkooda muddo ku dhow laba bilood. Ka dib waqtiyo adag, waxaan dib u bilawnay wax soo saar caadi ah. Si kastaba ha noqotee, fayrasku wuxuu ku sii kordhay adduunka oo dhan. Mid kamid ah macaamiisheena ...
ALLWIN –Baaxiye qalabka xafiisyada caan ku ah
Qof macmiil ah oo ku nool Brazil ayaa dalbaday alaab waraaqo ah oo xambaarsan 1 × 20-inji laba bilood ka hor. Dhamaadkii Julaay 2019, isaga iyo xaaskiisa waxay yimaadeen bakhaarkayaga si loo baaro. Kormeer kadib, wuxuu aad ugu qancay alaabteenna ALLWIN. Aad ayaan ugu faraxsanahay arrintan waxaanan aaminsanahay inay tani noqon doonto go ...
PVC Mat ayaa si guul leh uga gudbay 2.0 RoHS toban tijaabo oo aan birta ahayn
128th Canton Fair 10.15 ~ 10.24 Ku soo dhawow inaad soo booqato waabkeenna: 1.2M15-16 oo saf ah
Macaamiisha qaaliga ah, saamaynta ay ku yeelatay cudurka cusub ee sambabaha ee adduunka ku faafaya sannadkan, sanadkan Canton Fair dhammaantiis waxaa lagu qabtay qadka ama qadka. Carwadii 128-aad ee Kanton ayaa bilaabatay, waqtiga qabashaduna waa Oktoobar 15-keeda ilaa Oktoobar 24-keeda. Hada waxaa si gaar ah lagugu casuumay inaad daawato o ...